MCSE प्रमाणन कोर्स को लाभ | माइक्रोसफ्ट गुड़गाँव | यो
एमसीएसई प्रमाणन कोर्सको फाइदा
MCSE प्रमाणन कोर्स को लाभ के हो?
MCSE प्रमाणन कोर्स के हो?
MCSE प्रमाणन कोर्स कमाई को लाभ
तपाईं पर्याप्त अवसर अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ
तपाईं राम्रो तरिकाले चलाउने योग्यताहरूको सेट प्राप्त गर्नुहुनेछ
एक अय्यूब सुरक्षा
एक राम्रो वेतन
आईटी विशेषज्ञहरूले उनीहरूको अन्तर्दृष्टि र क्षमता हरेक पटक एकचोटि पूर्वावलोकन गर्न आवश्यक छ जस्तै आईटी संसार सधै परिवर्तनको चिन्हहरू देखाइरहेको छ। त्यसो गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो ट्राफिकको क्यारियरमा पछ्याउन सक्छ। एउटा यस्तो क्षमताले तपाईंलाई यो लगातार विकसित नवाचार संचालित संसार संग समृद्ध अवस्थामा राख्नेछ MCSE प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम। प्रमाणीकरणले आईटी प्रोफेसरहरूमा सबैभन्दा आवश्यक आवश्यक लिपिलाई लामो रूपमा स्थापित गरेको छ।
MCSE, Microsoft प्रमाणित प्रणाली इञ्जिनर, सबैभन्दा विजेता प्रमाणीकरण हो जुन आईटी मास्टरले अनुरोध गर्न सक्दछ। माइक्रोसफ्ट, यो प्रस्तावित माइक्रोसफ्ट प्रमाणीकरण एक पूर्ण आवश्यकता हो प्रणाली र सर्भर ईन्जिनियर्स को लागि उपकरण छ। यो7परीक्षाहरूको व्यापक व्यवस्था हो जुन विभिन्न मोडलहरूमा तपाईंको अन्तर्दृष्टिको परीक्षण गर्दछ, उदाहरणका लागि, एक्सचेन्ज सर्भर, प्रणाली सेन्टर (SCCM) विन्डोज, SQL सर्भर, SharePoint, र Lync।
MCSE यो आईटी प्रोफेसरहरूको विस्तृत दायराको लागि मरम्मत गर्दछ जसले यस खराब संसारमा अरुलाई किन बढाउन आवश्यक छ। कुनै पनि मामला मा, केहि प्रकार को प्रोफाईल छ जो MCSE प्रमाणीकरण को शून्य मा आफ्नो तर्क को खो दि्छ, र उनि को रूप मा व्यक्त गर्न सकिन्छ:
डाटाबेस ब्याकअप प्रशासक
SQL सर्भर प्रशासक
यी प्रविधिहरूले अनिवार्य रुपमा MCSE कोर्स प्राप्त गरेर आफ्नो मूल्य र लाभप्रदता विस्तार गर्न सक्छन्।
सम्पत्तिलाई छनौट गर्ने क्रममा फोकस गर्न आवश्यक छ किनकि सबै स्थापनाले प्रत्यक्ष उपक्रम प्रशिक्षण र प्रशंसनीय हजहरूको बारेमा सोच्न सक्तैन। पूर्वनिर्धारित प्राप्त गर्न प्रमाणीकरण सरल छैन। यसले विस्तृत सातौं परीक्षाहरू खाली गर्न अभ्यास गर्दछ। यसको लागि, तपाइँलाई मात्र राम्रोसँग निर्भर गर्न आवश्यक छ। अभिनव टेक्नोलोजी सॉल्युशन यस्तो सम्पत्ति हो जुन एमएसईई कोर्स को प्राप्त गर्न को लागि सबै भन्दा विश्वसनीय दृष्टिकोणहरु को बीच एक विरासत को रूप मा बनाएको छ।
सबै कुराले विचार गर्यो, प्रमाणीकरण तपाईंको लागि मौलिक अवधारणाहरु को एक कट्टरपंथी नयाँ ब्रह्मा खुल्यो। उदाहरणका लागि, MCSE गर्दै: सर्भर 2012 R2 प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण पाठ्यक्रमहरूमा सर्भर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, तपाईं आफ्नो कार्य क्षेत्र बढाउन सक्नुहुन्छ र क्षमता, प्रणाली प्रशासन, भर्चुअलकरण, प्रणाली प्रशासन र क्यारेक्टर प्रशासन जुन नजिक थिएनन्। तपाईंको विधि पहिले। जस्तै तरिकाले, पाठ्यक्रमले तपाईंलाई क्लाउड कम्प्युटिङ, निजी क्लाउड, सेप्टेप्टर र विभिन्न क्षेत्रहरूसँग अनुकूलित MCSE प्रमाणपत्रको साथ निरन्तर पहुँच दिन्छ।
आईटी उद्योग असाधारण अनुरोध गर्दैछ। नजिकैको, यो अनुरोध कि क्षमताहरू बोर्डमा अतिरिक्त छन्। कुनै पनि पाठ्यक्रम स्नातक र स्नातकोत्तर स्तरको पाठ्यक्रमले यसको व्यापक दायरा ढाक्न सक्छ। एक सहायक सहयोगीको लागि जानु आवश्यक छ र एमसीएसई प्रशिक्षण तिनीहरूलाई पूरा गर्न सबैभन्दा उत्तम तरिका हो। यसले तपाइँलाई फोकस गर्न सीमित क्षमतामा अप-टु-मिनेट टेक्नोलजीजहरूसँग परिचित गराउनेछ।
आईटी व्यवसायमा सब्सिडेन्स, लागत-कटौती र फरक शैतानहरू छन् जुन कामको बारेमा तपाईं अविश्वसनीय बनाउनुहुन्छ। आईटी उद्योगले उनीहरूको लागु लागु हुने लागू नभएसम्म उनीहरूको टोली परिवर्तन गर्न गल्ती गर्दैन, वा निरपेक्ष ढाँचा अनुसार ताजा हुँदैन। यस अवस्थामा, एकलाई थप किनारा बढाउनको लागि आवश्यक छ। एक एमसीएसई प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण तपाईंको एक मात्र उपकरण हो कि उठाउन को लागि।
यो निश्चय गरिएको छ कि एक अतिरिक्त योग्यताले तपाइँको पेचेकमा ज्वरोको मात्रा विस्तार गर्नेछ। एक एमसीएसईले प्रमाणित पुष्टि गरेको सायद सायद प्रति वर्ष $ 96,215 अचम्म लाग्न सक्छ। यो तपाईंको अनुभव संग विस्तार मा रहनेछ।
MCSE प्रमाणीकरण को पकडने सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो जुन आईटी पेशेवर कभी बनाइएगा। MCSE कोर्स विश्वभरका एकतामा राखिएको छ र निरन्तर कार्य परिस्थितिमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
शीर्ष 10 माइक्रोसफ्ट प्रमाणपत्र आज 2018 मा मांगमा